Jurgen Klopp Oo War Rasmi Ah Kasoo Saaray Haddii Mohamed
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka hadlay haddiiba garabka kooxdiisa ee Mohamed Salah uu diyaar u yahay kulanka Atlanta ee Champions League ee habeen dambe xilli warar cusubi kasoo kordhayaan xaalada khadka dhexe ee Thiago Alcantara.
Klopp ayaa hadda shaaciyay inuu Mohamed Salah diyaar u yahay kulanka Atlanta kaddib markii uu sababta caabuqa Korona Fayras u seegay kulankii Leicester City ee Axadii.
Salah ayaa xanuunka ka qaaday arooskii walaalkii oo uu ka qayb galay isaga oo jooga dalkiisa Egypt balse waxa ugu dambayn loo ogolaaday inuu ku laabto magaalada Liverpool si uu halkaas karantiin ugu galo.
Kaddib markii uu ku laabtay England, Mohamed ayaa baadhitaan lagu sameeyay lagaga waayay xanuunka taas oo ka dhigan inuu u furnaa kuna soo laabtayba tababarka kooxdiisa.
Jurgen Klopp oo ka hadlayay arrimaha Salah ayaa yidhi “Mo waxa uu u tababartay una muuqday dhab ahaan si wanaagsan, xanuunka waa laga waayay sida inta kale, isaga waa la heli karaa, waa inaynu aragno waxa aynu ku qaban karno midaas”
Dhinaca kale Thiago Alcantara ayaa la fahamsan yahay inuu ku dhaw yahay inuu soo laabto kaddib mudo bil ka badan oo uu dhaawac ku maqnaa walow aan la hubin haddii uu ciyaartaa habeen dambe diyaar u noqon doono.
Alcantara ayaa 2 kulan u ciyaaray Reds tan iyo markii uu 20 Milyan oo Pound ugaga soo biiray dhinaca Bayern Munich suuqii xagaaga isaga oo dhaawac jilibka ahi ku gaadhay ciyaartii Merseyside Derby ee ay Everton bar-bardhaca lasoo galeen.
unanimously, the international community demands an end to the fighting in Tigray
Somalia at a crossroads calls on the UN envoy to ‘deepen’ politically